EU itinye ego ọtụtụ ijeri Euro Na European Travel Site Ụgbọ oloko | Save A Train
Home > Travel Europe > EU itinye ego ọtụtụ ijeri Euro Na European Travel Site Ụgbọ oloko
EU enyela atụmatụ itinye ego karịrị ijeri euro 100 n'ime ụgbọ oloko iji bulie njem Europe, Nke a na ulo oru mbo ga ikpokọta na ọha na onwe ego. kpam kpam, ngụkọta ego ga-akarị € 4.5 ijeri. The ego ga-abịa site a ego otu akpọ Ijikọ Europe Facility. Na mpempe, ego ga-abịa site na a ole na ole dị iche iche. Ìgwè ndị a na-agụnye mba, nkeonwe, na ụlọ akụ akụ.
Ego a ga-enyere kwalite na European njem okporo ígwè netwọk. Ọzọkwa, ego ga-enyere ịzụlite ọzọ mmanụ ụgbọala nhọrọ maka ụgbọ oloko. Ọzọkwa, ego ga-kpuchie ụzọ ebugharị efu efu.
Mmemme ga -elekwasị anya na isi netwọkụ nke njem Europe. € 719.5 nde bụ maka European okporo ígwè netwọk. € 99.6 nde bụ maka ịkwalite njem okporo ụzọ. Ọzọkwa, € 78.9 nde bụ maka ọdụ ụgbọ mmiri na -emepe emepe. Na € 44.7 nde bụ maka ụzọ mmiri dị n'ime mmiri.
Flagship atumatu na ego ga-ekpuchi na-agụnye;
amụba ọsọ nke ụgbọ oloko n'etiti Denmark na Germany.
Upgrading ụgbọ okporo ígwè e Slovenia
Railzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'agbata andtali na France
agbakwunye 340 odori ụgbọ n'ihi electric ụgbọala
Ịmụta waterways ruru ibu iga
Cologne na Copenhagen Ụgbọ oloko
Dresden na Copenhagen Ụgbọ oloko
Nuremberg na Copenhagen Ụgbọ oloko
Ego ụgbọ oloko EU ọzọ nke ijeri € 37 maka njem ndị Europe
Dị ka ụfọdụ kwuru isi mmalite, Europe etinyela ego € 37 ọzọ na ụlọ ọrụ ụgbọ oloko. A ego ga-enye ndị ọzọ ndị mmadụ ọrụ na ego. Netwọk okporo ígwè Europe bụ n'ihi mmụba nke ike na nkwado. Lee ụfọdụ n'ime ọrụ ndị ijeri € 37 eji;
Düsseldorf na Hamburg Ụgbọ oloko
Bonn na Berlin Ụgbọ oloko
Heidelberg na Munich Ụgbọ oloko
1. Gotthard Base Ọwara
Ka a na ọwara bụ 17 afọ, ọ meghere naanị maka njem Europe na 2016. N'ihi na nke Alpine ugwu, ọ were 2,400 ọrụ akuakuzinwo site. The ọwara si ogologo bụ fọrọ nke nta 57 km, na-eme ka ya kasị ọwara na ụwa. N'ihi na nke size nke ọwara, ọnụ ahịa ya bụ € 11 ijeri.
Nke a ọwara ejikọ Northern Italy na Southern Germany nke bụ ihe abụọ dị mkpa mba European njem ilekota. N'ọdịnihu, 240 ibu ụgbọ oloko ga-eji nke a ọwara. N'ihi na nke ọwara, na freights ga-eji dochie n'elu 2 nde ụgbọala njem kwa afọ. Gwongworo nwere ụgbọala elu ugwu na-eche na ọnụ ọgụgụ queues. N'ihi ya, na freights, nke ga -eme njem na -enweghị nkwụsị 160 A ga -ahọrọ KM kwa elekere.
Nke a ofu njikọ ọwara ga-fọdụrụ n'ezinụlọ mikpuru ọwara na ụwa. Ọwara a ga -ejikọ Denmark na agwaetiti German nke Fehmarn. Mkpokọta ọnụ nke ọwara njikọ a bụ ijeri euro 7. Nke a njikọ ga-ebipụ ndị ụgbọ okporo ígwè na njem oge n'etiti Stockholm na Hamburg site 2 awa. The ibu ụlọ ọrụ n'etiti Germany, Denmark, na Sweden nwetara massively a njikọ, nke a gha eme ka njem Europe kwalite.
Stuttgart na Hamburg Ụgbọ oloko
Antwerp na Hamburg Ụgbọ oloko
Leipzig na Hamburg Ụgbọ oloko
Bonn na Hamburg Ụgbọ oloko
VDE 8 bụ ma eleghị anya ndị kasị ibu ụgbọ okporo ígwè na-ewu na saịtị na Germany. Ngo mma iga gafee Germany. N'ihi na nke size na technology na VDE 8 akara n'etiti Berlin na Munich na -efu billion 10 ijeri.
Ticket ntinye akwụkwọ na 3 nkeji
Ntinye akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi na maka European njem? Ọ gaghị 3 nkeji na anyị na saịtị na-ahụ ndị dị ọnụ ala tiketi maka gị ụzọ gasị. Nbanye anyị na saịtị ugbu a ka akwụkwọ ụgbọ oloko. Tiketi nwere ike ugwo maka na otutu ụzọ, tinyere ezigbo na Ebe E Si Nweta kaadị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feu-invest-1-billion-euros-european-travel%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / na / ru ma ọ bụ / ja na ndị ọzọ asụsụ.
#akụrụngwa #tinye ego europetravel Train Travel